Vaovao - inona ny fahasamihafana amin'ny paompy hafanana, loharano hafanana avy amin'ny tany?
Rehefa mividy vokatra mifandraika amin'ny paompy hafanana ny mpanjifa dia ho hitany fa maro ny mpanamboatra manana vokatra hafanana toy ny paompy hafanana, loharano hafanana ary loharano hafanana. Inona no mahasamihafa azy telo?
Paompy hafanana rivotra
Ny paompy hafanan'ny rivotra dia entin'ny compressor, mampiasa ny paompy hafanana amin'ny rivotra ho loharano hafanana ambany, ary mamindra ny angovo amin'ny tranobe amin'ny alàlan'ny rafi-pandrefesana mba hamaly ny filan'ny mpampiasa rano mafana ao an-trano, fanafanana na fifehezana rivotra.
Fandidiana azo antoka sy fiarovana ny tontolo iainana: ny hafanana amin'ny rivotra misy loharano hafanana dia loharano mafana, izay tsy mila mandany entona voajanahary ary tsy handoto ny tontolo iainana.
Fampiasana malefaka sy tsy voafetra: raha oharina amin'ny hafanana amin'ny masoandro, fanafanana etona ary loharano hafanana amin'ny loharanon'ny rano, ny fantsom-panafaran'ny hafanan'ny rivotra dia tsy voafetran'ny toe-piainana ara-jeolojika sy ny famatsian-tsolika, ary tsy voakasiky ny toetr'andro ratsy toy ny alina, andro be rahona, orana sy oram-panala. . Noho izany dia afaka miasa 24 ora isan'andro mandritra ny taona izy io.
Teknolojia fitsitsiana angovo, fitsitsiana herinaratra ary fitehirizana ahiahy: ny paompy hafanan'ny rivotra dia mahomby sy milamina amin'ny tontolo iainana. Raha ampitahaina amin'ny fanafanana herinaratra dia afaka mitahiry hatramin'ny 75% amin'ny vidin'ny herinaratra isam-bolana izy io, ary mitahiry fihenan'ny herinaratra ho an'ny mpampiasa.
Paompy hafanana amin'ny loharano
Ny fitsipiky ny fiasan'ny rano paompy hafanana loharano dia ny famindrana ny hafanana ao amin'ny trano mankany amin'ny loharano amin'ny fahavaratra; Amin'ny ririnina, ny angovo dia alaina avy amin'ny loharanon'ny rano miaraka amin'ny maripana tsy miova, ary ny fitsipiky ny paompin-hafanana dia ampiasaina hampiakarana ny mari-pana amin'ny alàlan'ny rivotra na rano toy ny vata fampangatsiahana, ary avy eo alefa any amin'ilay trano. Matetika, ny paompy hafanan'ny loharanon'ny rano dia mandany herinaratra 1kW, ary ny mpampiasa dia afaka mahazo hafanana mihoatra ny 4kw na fampangatsiahana. Ny paompy hafanana amin'ny loharano dia mandresy ny hatsiakan'ny mpanondrana hafanana ety ivelany amin'ny paompy hafanana amin'ny lohataona, ary manana fahamendrehana avo lenta sy fahombiazan'ny hafanana. Ampiasaina be any Chine io tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Mba hiarovana ireo loharano anaty rano amin'ny loto, ny tanàna sasany dia mandrara ny fitrandrahana sy ny fampiasana azy; Ny paompy hafanana amin'ny loharanon'ny rano mampiasa rano rano sy renirano dia voakasiky ny anton-javatra maro toy ny fihenan'ny haavon'ny rano amin'ny vanim-potoana. Betsaka ny famerana ny fepetra fampiasana fantsona hafanana loharano.
Paompy hafanana any anaty tany
Ny paompy hafanana any ambanin'ny tany dia fitaovana iray mamindra angovo madiodin'ny tany avy amin'ny angovo hafanana ambany mankany amin'ny angovo hafanana avo lenta amin'ny alàlan'ny fampidirana angovo avo lenta (toy ny angovo herinaratra). Ny paompy hafanana amin'ny tany dia rafitra fanamafisam-peo afovoan-tany misy vatolampy sy tany, tany stratum, rano ambanin'ny tany na rano amboniny ho loharanom-pahavitan'ny hafanana ambany ary mifangaro amin'ny vatan'ny paompy hafanana, loharanom-pifanakalozana angovo geothermal ary rafitra amin'ny fananganana. Araka ny endriny samihafa amin'ny rafitra fifanakalozana angovo geothermal, ny rafitra paompy hafanana amin'ny tany dia mizara ho rafitra fantsom-pamokarana hafanana, loharano mafana, loharano mafana sy loharanon'ny rano.
Ny vidin'ny paompy hafanana amin'ny tany dia mifandraika mivantana amin'ny faritra onenana. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny fampiasam-bola voalohany amin'ny rafitry ny paompy hafanana loharanon'ny tany dia avo.
Ny fampiasana angovo madio mandritra ny fiasan'ny loharanon-tany, ny loharano misy rano ary ny paompy hafanana dia afaka mitana ny anjara asan'ny fiarovana ny angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny lafiny iray. Na dia avo aza ny vidin'ny fampiasam-bola voalohany, dia ambany ny vidin'ny fandidiana taty aoriana ary afaka mandoa ny vidin'ny fametrahana azy ny fampiasana maharitra.
Fotoana fandefasana: Oktobra-05-2021